Samachar Batika || News from Nepal » महिलाले किन देब्रे नाक मात्रै छे’ड्ने गर्दछन् ? थाहा पाउनुहोस
महिलाले किन देब्रे नाक मात्रै छे’ड्ने गर्दछन् ? थाहा पाउनुहोस
पोखरा । प्रायः महिलाहरुले नाक छे’ड्छन् । नेपाली महिलाले किन नाक छे’डाउछन् भन्ने कुरा सवैलाई थाहा हुँदैन ।यतिसम्मकी नाक छे’ड्ने स्वयं महिला पनि यस विषयमा अ’नभिज्ञ हुन्छन् । नाक छे’ड्नुलाई धेरैजसोले श्रृं’गारसँग मात्र जो’ड्ने गर्छन् ।
तर नाक छे’ड्नु श्रृंगारसँगमात्र सम्बन्धित छैन, यसको धार्मिक तथा बैज्ञानकि कारण पनि छ जुन यहाँ उल्लेख गरिएको छ-हिन्दुशास्त्रको पवित्र ग्र’न्थ वे’दका अनुसार नाक छे’ड्ने महिलाहरुलाई म’हिनावारी हुँदा हुने पी’डाबाट राहत मिल्छ ।
प्र’सवको समयमा शिशुलाई ज’न्म दिन पनि सजिलो हुने धार्मिक विश्वास छ ।त्यस्तै नाक छेड्’नाले टाउको दु’ख्ने वा मा’इग्रेनको स’मस्याबाट पनि मु’क्ति मिल्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, महिलाले देब्रे नाक मात्रै किन छे’ड्छन् भन्ने विषय पनि सवैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
प्र’सवको समयमा शिशुलाई ज’न्म दिन पनि सजिलो हुने धार्मिक विश्वास छ ।त्यस्तै नाक छेड्’नाले टाउको दुख्ने वा मा’इग्रेनको स’मस्याबाट पनि मु’क्ति मिल्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यसले प्र’जनन अ’ङ्गमा न’कारात्मक असर नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।महिलाको देब्रे नाकको न’शा प्र’जनन अ’ङ्गसँग जोडिएको हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्तै बाँया कान छे’ड्नाले र’क्त चा’पजस्तो स’मस्याहरुमा पनि क’मि आउने बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति २७ माघ २०७६, सोमबार १४:३५